Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana India » India dia nanambara ny fitomboan'ny Super Drector Sector
Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao Mafana India • Vaovao • Tourism
Mandeha dingana iray hafa mankany amin'ny fanatanterahana ny vina iraisan'ny Aatmanirbhar Bharat, ny governemanta foibe tarihin'ny praiminisitra India Shri Narendra Modi, dia namoaka ny sari-tanan'ny habakabaka India ho an'ny asa drôna.
Ny fanavaozana ny politikam-piaramanidina an-habakabaka dia hanainga ny fitomboana ara-dalàna eo amin'ny sehatry ny drone ho any India.
Drones dia manolotra tombony lehibe amin'ny ankamaroan'ny sehatra rehetra amin'ny toekarena.
Noho ny tanjany nentim-paharazana amin'ny fanavaozana, ny teknolojia fampahalalana, ny injenieran'ny fitsitsiana ary ny filana lehibe eto an-toerana, dia mety ho lasa hub drone manerantany i India amin'ny 2030.
Ny sarintanin'ny habakabaka an'habakabaka dia tonga amin'ny fanarahana ny Fitsipika Drone malala-tanana, 2021 navoakan'ny Governemanta foibe tamin'ny 25 aogositra 2021, ny tetika PLI ho an'ny drôna navotsotra tamin'ny 15 septambra 2021, ary ny Geospatial Data Guidelines navoaka tamin'ny 15 feb. 2021. Ireo fanavaozana ireo politika rehetra ireo dia hampisy ny fitomboana ara-dalàna eo amin'ny sehatry ny drone ho avy.
NAHOANA NO MAHATONGA I DRONES?
Drones dia manolotra tombony lehibe saika amin'ny sehatra rehetra amin'ny toekarena. Anisan'izany fa tsy voafetra amin'ny fambolena, fitrandrahana harena ankibon'ny tany, fotodrafitrasa, fanaraha-maso, valiny vonjy maika, fitaterana, sarintany geo-spatial, fiarovana ary fampiharana ny lalàna mba hanonona vitsivitsy. Drôna dia mety ho mpamorona asa lehibe sy fitomboana ara-toekarena noho ny fahatongavany, ny fahaizany maro ary ny fampiasana azy, indrindra any amin'ireo faritra lavitra sy tsy azo idirana.
INONA NO INDRINDRA AZO ATAO NY INITIATVA DRONE IREO?
Noho ny lalàna vaovao, ny drafitra PLI drone sy ny sarintany habakabaka drone azo idirana malalaka, ny indonezia sy ny indostrian'ny mpamokatra singa drone dia mety hahita fampiasam-bola mihoatra ny INR 5,000 crore mandritra ny telo taona. Ny fivarotana varotra isan-taona an'ny indostrian'ny famokarana drone dia mety hitombo manomboka amin'ny INR 60 crore amin'ny vala 2020-21 ka hatramin'ny INR 900 crore amin'ny FY 2023-24. Ny indostrian'ny famokarana drone dia antenaina hiteraka asa mivantana maherin'ny 10,000 ao anatin'ny telo taona ho avy.
Ny indostrian'ny serivisy drone, izay misy ny fampandehanana, ny sarintany, ny fanaraha-maso, ny famafazana ny lohan-tany, ny logistika, ny angon-drakitra momba ny angon-drakitra, ary ny fampivoarana ny lozisialy, hanomezana anarana ny sasany dia hitombo amin'ny ambaratonga lehibe kokoa aza. Antenaina fa hitombo mihoatra ny INR 30,000 crore ao anatin'ny telo taona ho avy. Ny indostrian'ny serivisy drone dia antenaina hiteraka asa 500,000 ao anatin'ny telo taona.
Ny sarintanin'ny habakabaka ho an'ny fiasan'ny drôna dia misy amin'ny Sehatry ny lanitra nomerika an'ny DGCA.